Nzuzu cypionate Raw Boldenone (106505-90-2) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / Anabolics Steroids / Boldenone ntụ ntụ / Boldenone cypionate ntụ ntụ
SKU: 106505-90-2. Categories: Boldenone ntụ ntụ, Anabolics Steroids
AASraw nwere njikọ na mmepụta ikike site na gram ka usoro nhazi nke Boldenone cypionate powder (106505-90-2), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Boldenone, nke a makwaara dịka 1-testosterone, bụ steroid anabolic-androgenic synthetic (AAS) na 1 (2) nke ana-emepụta nke testosterone. Boldenone n'onwe ya enwebeghị ahịa; dị ka ọgwụ ọgwụ, a na-eji ya dị ka boldenone undecylenate, ester undecylenate.
Boldenone cypionate ntụ ntụ video
Boldenone cypionate ntụ ntụ isi Characters
aha: Boldenone cypionate
Molekụla Formula: C26H38O3
Ọbara arọ: 398.58
Raw Boldenone cypionate powder use in steroids cycle
Boldenone cypionate, a na-akpọkwa Bold Cyp. Na cypionate ester na boldenone ga-eme ihe ahụ dịka ọ ga-aga na testoserone. Ihe nkwụsị ahụ ga-abụ otu ihe ahụ mgbe ọ gbasasịrị.
Raw Boldenone cypionate ntụ ntụ Usage
Ndị na-eme egwuregwu na ndị na-eme egwuregwu na-eji ngwá ọrụ eme ihe iji mee ka ntachi obi, ikuku ahụ na mmepụta mkpụrụ ndụ uhie na ahụ. N'iji ahụike, nkwadebe nwere ike kwalite erythropoietin (EPO) ihe na-akpali akpali nke, n'aka nke ya, na-akpali ọkpụkpụ ọkpụkpụ ọkpụkpụ nke na-eduga n'ọtụtụ mkpụrụ ndụ uhie uhie. Maka ndị mmadụ, ọgwụ dị arọ bụ 400-600mgs kwa izu. Maka ụmụ nwanyị, ọgwụ dị arọ bụ 25-50mgs kwa izu, ma ị ghaghị ịkpachara anya. Ọ bụrụ na ị ahụ nnukwu mmetụta.
Ịdọ aka ná ntị na Boldenone cypionate ntụ ntụ
Boldenone cypionate enweghị nnukwu aromatization ikike. Mgbe a na-eji doses dị elu mee ogologo oge, o nwere ike ịdị mkpa iji antiestrogens ma ọ bụ ndị na-emechi ihe dị ka arimidex. Mmetụta etrogenic ahụ adịghị elu n'ihi na androgenicity ya dị ala. Nke a na - eme ka ọ bụrụ ihe nchekwa dị mma maka ụmụ nwanyị iji. Otú ọ dị, ọ bụrụ na a na - eji doses dị elu enwere ihe ize ndụ maka mmetụta ndị dị ka akpụkpọ na akpụkpọ anụ.
Boldenone bụ steroid steeti etrogenic anabolic na-ejikarị eme ihe na ọrịa anụmanụ karịa ọgwụgwọ mmadụ.
Boldenone Cypionate, dị ka ọgwụ ndị ọzọ na-emepụta ọgwụ anabolic etrogenic, bụ nke e mere iji gosipụta mmetụta nke testosterone.
Boldenone Cypionate Ntụ ntụ ntụ
Esi zụta Boldenone Cypionate ntụ ntụ si AASraw
Boldenone Cypionate Ntụ ntụ ntụ ntụ ntụ
1 nyochaa maka Boldenone cypionate ntụ ntụ
Boldenone cypionate ntụ ntụ bụ ọgụgụ isi
Methasteron (Superdrol) ntụ ntụ